Ambohidrabiby dia tanàna miorina eo antampon-tendrombohitra.
ⓘ Ambohidrabiby dia tanàna miorina eo antampon-tendrombohitra. Ara-panjakana, ao anatinny Kaominina Ambohidrabiby, distrika Avaradrano, faritra Analamanga ary far ..
18.483330°S 47.250000°E ﻿ / -18.483330; 47.250000 I Fonohasina dia vohitr andriana masina sy manan-tantara aty Imerina, miorina eo tehezan ny alahamaditanin Ambohidrabiby. Ny Andriandoriamanjaka no tompon io vohitra io. Rehefa nilamina ny tany dia nanao fizaràn-tany teo Ambohidrabiby renivohim-panjakany ny mpanjaka Ralambo 1575-1610 ka ny faritra avaratry ny lapany, ny avara-drova, ny vakin-kady avaratra ary ny ambany avaratr Ambohidrabiby no zara-tany nomeny ny Andriandoriamanjaka. Tafiditra amin io zara-tanin ny Andriandoriamanjaka io i Fonohasina.
Imerina efa-toko dia ny fizaràna ho faritra efatra an Imerina tamin ny andron Andriamasinavalona, ka ireo faritra ireo dia nampanapahiny ny zanany efa-dahy. Tamin ny andron Andrianampoinimerina, dia niova ho Imerina enin-toko izany. Andrianavalonimerina tao Ambohidrabiby sy Mandiavato; Andriatsimitoviaminandriandrazaka tao Ambohimanga sy Avaradrano. Andrianjakanavalomandimby nanjaka teo Antananarivo sy Imerina Atsimo; Andriantomponimerina Ambohidratrimo sy Marovatana;
I Avaradrano dia iray amin ireo fizaràna an Imerina ho efa-toko tamin ny andron ny mpanjaka merina Andriamasinavalona na enin-toko nanomboka tamin ny andron Andrianampoinimerina, ka izy no nalaza indrindra tamin ireo faritra ireo. Ny fizaràna dimy hafa dia i Vakinisisaony, i Marovatana, Ambodirano, i Vonizongo, ary i Vakinankaratra. Mizara telo i Avaradrano, dia: i Tsimahafotsy, i Tsimiamboholahy, i Mandiavato. Ny rano Andranobevava eo atsimon Analamahitsy naha Avaradrano azy. Tao no fiavian Andrianampoinimerina.
Rabiby dia mpanjaka tao Anjozorobe taminny taonjato faha-16, raiben-d Ralambo tamin-dreniny. Hatraminny taonjato faha-16 taorian i J.K, dia maro ireo zanakandriana sy fianakavianny mpanjaka aminny faritri Arabia no niala tany Arabia noho ny ady antrano teo aminireo zanakandriana mpandova fanjakana, ka nidina nanaraka ny sisiny antsinanani Afrika ary nizarazara namorona fanjakanandriana taminizany faritra izany. Isanireny ireny ny zanakandriana na printsy Habib sy ireo mpanjaka arabo tao Zanzibar sy Komoro ary ireo razanandriana namorona fanjakana tao avaratra andrefani Madagasikara sy tami ...
Ny Andrianamboninolona dia andriana merina, taranak Andrianamboninolona, rahalahin-dray no rafozan ny mpanjaka Ralambo. Iray amin’ ireo antanantohatr’ andriana fito nisy tao Imerina talohan’ ny taona 1896 izany. Atao hoe Zanakambony koa izy ireo”. Antanantohatr andriana eo anelanelan ny Andriandranando sy ny Andriantompokoindrindra ny Andrianamboninolona. Tato aoriana dia nantsoina ho Andrianteloray ny Andriandranando sy ny Andriantompokoindrindra ary ny Andrianamboninolona.
Ny Andriandranando na Zanadranando dia andriana merina nipoitra tamin ny mpanjaka Andriandranandobe. Avy amin ny faritry ny ala antsinanana izy no niakatra taty Imerina ankehitrio izy mba hitady zara-tany hanjakana. Tsy nataon-dRalambo ho isan ny folovohitra ny taranak Andriandranandobe fa notazominy ho andriana.
Ny Zazamarolahy dia sokajin andriana tamin ny nanasokajiana azy ireo, ka tamin ny voalohany, dia ireo taranak izy efa-dahy, zanaky ny mpanjaka Andriamasinavalona, nanjaka teo Antananarivo sy Imerina Atsimo, tao Ambohidrabiby sy Mandiavato, Ambohidratrimo sy Marovatana ary Ambohimanga sy Avaradrano izany. Novain’ Andrianampoinimerina anefa izany tato aoriana ka nataony toy izao: Ny tera-dRasoherina renibeny ihany no angalana izay hanjaka ka ny tera-behivavy ny zana-drahavavin-dreniny dia natao Zanakandriana, ary ny tera-dehilahy sy ny tera-dRangorinimerina natao Zazamarolahy. Ny Zanakandria ...
Ny hasina dia hazo lava taho ka eny aminny lohany no mivangongo ireo ravina maro somary lava mahia. Ity hazo hasina ity moa any amorontsiraka sy any anala no maniry sy mijoalajoala tokoa fa aty Imerina kosa dia saika nambolena aminny tanànanny Ntaolo. Noheverinny ntaolo ho itoeranny hasina hery ireny zavamaniry atao hoe hasina ireny. Tsy maniriniry fahantany ny hasina taty Imerina fa matetika aminny tanànanandriana na toerana masina misy vazimba sy kalanoro, ny fasanandriana, ny fantsakanandriana, ny doany ary ny trano itoeranny mpanandro, mpimasy sy mpisikidy no ambolena azy. Any aminny f ...
Andriandranandobe dia mpajaka merina niaina tamin ny taonjato faha-16, razambe nipoiran ny terak Andriandranando, atao koa hoe Andriandranando na Zanadranando. Avy amin ny faritry ny ala atsinanana izy no niakatra taty Imerina ankehitrio izy mba hitady zara-tany hanjakana. Zanaky ny mpanjaka Andriamamilazabe sy Andrianetohento izy. Tsy nataon-dRalambo ho isan ny folovohitra ny taranak Andriandranandobe fa notazominy ho andriana. Telo lahy ny zanak Andriandranandobe dia: Andriakomahitsy, lahiaivo, tao Ambohibe izay tendrombohitra avo tokoa ahitana farihy masina fandevenana ny taovan ireo Za ...
Ny hasina dia hery tsy hita maso ka ireo andriana, mpanandro, mpisikidy ary ireo zavaboaharin Andriamanitra toy ny zazavavindrano, kalanoro, vazimba, ireo sampy, sns.izay afaka manova ny fiainanny olombelona no heverinny ntaolo ho manana azy. Ny loharanonio hery io dia Andriamanitra Andriananahary sy ny razana. Araka ny lovantsofina teo aminny andriana anefa, ny hasina aminny andriana dia avy aminny zanakandriamanitra mihitsy fa tsy toy ireo hasina hita aminny zavaboahary hafa. Raha nidina nilalao tety ambony tany ny zanakAndriamanitra dia tsy tafody tany an-danitra intsony satria voaota f ...
Ambohidrabiby dia tanàna miorina eo antampon-tendrombohitra. Ara-panjakana, ao anatinny Kaominina Ambohidrabiby, distrika Avaradrano, faritra Analamanga ary faritanin Antananarivo io tanàna io. Tao anatinny Kaominina Talata Volonondry izy talohanny volana aprily 2015. Ireo tendrombohitra manodidina azy dia Ambohimanga no eroa ampita andrefany, Ambohitrandriananahary no eroa ampita avaratra antsinanany, Ilafy sy Antananarivo no eroa ampita atsimony. Raha mitaha aminireo tendrombohitra 12 masina ao Imerina kosa dia Ambohidrabiby no eo aminny zoro avaratra-antsinanana. Raha ho any Ambohidrabiby dia eo aminny PK 22 Km mahery manaraka ny lalampirenena faha-3 mihazo an Anjozorobe no misy azy ary eo aminny tobinny fiaram-pitaterana Ambodivona, fiara mankeny Talata Volonondry no raisina.
1.1. Ny anaram-bohitra Araka ny angano
1.2. Ny anaram-bohitra Araka ny lovantsofina
Araka ny lovantsofina, ny voalohan’ny taonjato faha-16 anefa dia nisy mpanjaka arabo nantsoina hoe Habib nogasiana ho Rabiby rehefa vaky sambo tao amorontsiraka avaratra-antsinanani Madagasikara dia niakatra taty afovoantany izy sy ireo olom-peheziny ary tonga tao Ambohitsitakatra ao Anjozorobe koa naka vady ani Ramaintsoakanjo izay zanaka vavinny mpanjaka vazimba tao Ambohitsitakatra. Tato aoriana dia niala tao Ambohitsitaka i Rabiby sy ny fianakaviany, ny vahoakany ary ireo angaralahiny koa tonga teo ambany avaratra antsinananAnkotrokotroka anaranAmbohidrabiby taloha. Taminizany dia nisy tanànanny Vazimba niorina teo antamponAnkotrokotroka ary Andriandroka no mpanjaka vazimba teo. Nikasa haka anAnkotrokotroka i Rabiby koa mialohanizany dia nanao joro nangataka fitahiana taminAndriamanitra teo ambany avaratra antsinanny vohitrAnkotrokotroka eo aminny misy ny tanàna Fonohasina ankehitrio ny mpanjaka Rabiby araka ny fombafomba nampanaovinny ombiasy. Rehefa izany dia nanihiny ny vohitrAnkotrokotroka koa azony mora foana ary nitsoaka ireo Vazimba nonina teo. Nanan-daza loatra Rabiby ka niova ho Ambohidrabiby ny anaranny vohitra Ankotrokotroka. Misy lovatsofina milaza fa izy Rabiby ihany no nanova anAnkotrokotroka ho Ambohidrabiby anefa misy lovantsofina hafa milaza fa ny mpanjaka Ralambo no nanova ny anarambohitra ho Ambohidrabiby mba ho fahatsiarovana ny raibeny Rabiby.
2. Rabiby sy Ralambo: mpanjaka nalaza teo Ambohidrabiby
Mpanandro tsy nanam-paharoa ny mpanjaka Rabiby ka voatazon’ny ohabolana hoe "Aza milaza mahita volana alohan-dRabiby". Novain-dRabiby ho teny arabo ny anaram-bolana 12 sy ny anaranandro 7 taty anivonny riaka raha taminny teny vazimba sy maley izany, ka izy Rabiby no nampiasa ny teny hoe Alahamady, Adaoro, Alohontsy, Admizana, Alatsinainy, Talata, sns voalohany taty anivonny riaka. Ramaitsoakanjo no vadiny izay niterahany ani Rabefaravolamanjaka vavimatoany sy Randapavola Imaintsoanala vaviaivony. Tamin-dRabiby dia fanjakana vazimba sy maley mitsitokotoko maro ny taty anivon’ny riaka. Andriamanelo, mpanjaka maley teo Alasora tamin’ny taona 1540-1575, no nangataka an-dRabefaravolamanjaka ho vadiny saingy nampanambadian-dRabiby anAndrianamboninolona ity zanany vavimatoa ity satria ny zanakireo no nokasainy hampanjakaina, ka i Randapavola no nomeny ho vadin-Andriamanelo. Rabefaravolamanjaka sy Andrianamboninolona dia niteraka ireo Andriandoriamanjaka. Randapavola sy Andriamanelo kosa niteraka an-dRalambo tamin’ny andro vava alahamady rehefa tsy nahazo zaza in’enina izy ireo talohan’izany. Rabefaravolamanjaka dia nonina sy nafenina ao an-tampon Ambohitrandriananahary, tendrombohitra eroa ampita avaratra antsinananAmbohidrabiby satria tsy nety nanaraka anAndrianamboninolona izy. Natao ho Ambohitrandriananahary no anaranio vohitra io ho fahatsiarovana ny vohitrAmbohitrandriananahary eo avaratrAlasora izay vohitrAndrianamboninolona.
Ny lazan-dRabiby sy ny vohitrAmbohidrabiby hono no isanny nahatonga an-dRabefaravolamanjaka sy Ralambo 1575-1610 hisafidy hijanona eny Ambohidrabiby. Tsy nijanona tamin’ny rainy teo Alasora mantsy i Ralambo fa nanara-dreny teny Ambohidrabiby izay nofinidiny ho renivohitry ny fanjakany sy hilevenany. Teo Ambohidrabiby i Ralambo sy ireo Andriandoriamanjaka no niara-nitantana ny fanjakana sy namorona ireo soatoavina maro izay lova mipetraka hoanny foko sy andriana merina mandrakankehitrio toy ny fiantsoana ny tendrombohitra 12 raha hivavaka, ny fandroana, ny teti-razana, ny fihinanana omby, ny fitafiana ny jaky, sns.Tsy nionona tamin’ny fandovàna ny fanjakan-dRabiby raibeny sy Andriamanelo rainy teo Alasora mantsy i Ralambo fa nanohitra sy nandresy ireo foko Ontaiva, sy Antavaratra ary Sakalava tonga nanafika taty anivon’ny riaka. Nohodidinin-dRalambo hady telo sosona Ambohidrabiby hiarovany amin’ny fahavalo, koa Ambohidrabiby no vohitra fahatelo taty anivon’ny riaka nahitana hadivory. Nasiany apombo mirehitra ny hadivory ka maro ireo Antavaratra sy Bezanozano ary Sakalava no maty ka tsy sahy intsony nanarina ary nilamina ny tany nanomboka hatreo. Noreseny koa ireo fanjakana nahaleo tena nanodidina azy toa an’Imerikasinina sy Andrianafovaratra mpanjakany ary ireo Vazimba teo antsinanan’Ambohidrabiby. Tonga fanjakana lehibe voalohany taty anivon’ny riaka ny fanjakan-dRalambo satria voafaritra amin’izany hatrany Ambohimalaza, ka hatrany Ambohimanga, ka hatrany Andringitra, Mansindray, sy Talata Volonondry, ary Alasora ny fanjakany.
Taminny andronAndriamasinavalona kosa dia nozarainy 4 taminny zanany efa-dahy ny fanjakany koa ny zanany Andrianavalonimerina no nampitoeriny teo Ambohidrabiby. Lasanny rahalahiny teroa Ambohimanga anefa ny fanjakanAndrianavalonimerina koa tsy nahazo nilevina teo Ambohidrabiby i Andrianavalonimerina fa nafenina teo aminny rovanAntananarivo izy. Ny taranakAndrianavalonimerina koa dia noesorina teo Ambohidrabiby ary tsy nahazo zaratany teo Ambohidrabiby fa nafindranny mpanjaka honina ao Andranovelona avaratrAmbohidrabiby. Koa tsisy taranakAndrianavalonimerina intsony eo Ambohidrabiby hatraminizany fa taminAndrianampoinimerina vao tafaverina nonina teo Ambohidrabiby i Raketabao zafiafinAndrianavalonimerina.
Taminny Andrianampoinimerina 1787-1810 dia nametrahany ny vadibeny natao hoe Rasendrasoa teo Ambohidrabiby. Ambohidrabiby moa dia menabe fa tsy menakely no tsy vodivona koa tsy tompombodivona no tsy tompomenakely i Rasendrasoa, nefa dia nanana ny lazany koa izy. Raha tsiahivina, rehefa niamboho i Rabodonimerina vadinny mpanjaka Andrianampoinimerina dia Rasendrasoa no lasa vadiben Andrianampoinimerina. Rasendrasoa moa dia zafinAndriampolofantsy ao Atsomangy. Na dia zanadralambo aminAndrianjaka aza no firazananAndriampolofantsy, nisy taminny terakAndriampolofantsy kosa no natao ho Andriamasinavalona ny firazanany, isanireny ny taranakAndriamanitrirazaka lahiaivonAndriampolofantsy nipoiran-dRasendrasoa. Koa Andriamasinavalona fa tsy zanadralambo aminAndrianjaka akory arakizany ny firazanan-dRasendrasoa na dia taranakAndriampolofantsy izy ary avy ao Ambohitsoa no fiaviany. Ramatoa Rapoenty zafin-dRasendrasoa sy Andrianampoinimerina no saika hasandratra ho mpanjakani Madagasikara taminny taona 1863. Printsy Rabemaso zafin-dRavaozandriny Zanakandriana sy Andriamahanona Zanakandriana sady zafian -dRasendrasoa sy Andrianampoinimerina kosa no printsinAvaradrano sy Marovatana taminny fiafaranny fanjakanandriana teto Madagasikara taminny taona 1895. Mbola ao antamponAmbohidrabiby mandrakankehitrio ny fasana-dRasendrasoa sy ireo taranany.
3. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby
Rehefa nilamina ny tany dia nalamin-dRalambo ny vohitr’Ambohidrabiby araka ny vintana sy zon’ny tsirairay ka toy izao izany: Tao antampony sy afovoanAmbohidrabiby ny rova efa-joro voafefy rarivato sy hazo.
3.1. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Ny vavahadinny rova
Vavahady efatra no fidirana ao anaty rova. Aminny avaratry ny rova no misy ny vavahady avaratra izay natokana hidirana sy hivoahanny mpanjaka sy ny andriana. Aminny antsinananny rova ny vavahady antsinana natao hidirana sy hivoahanny hova. Aminny andrefanny rova ny vavahady andrefana natao hampiasainny rehetra. Ary eo atsimonny rova ny vavahady atsimo natao hidiranny mpanompo.
3.2. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Fandaminana ny anaty rova
Toy izao kosa ny fandaminana ao anaty rova. Eo aminny ilany avaratra antsinanana aminny toerana avo indrindra ao anaty rova no misy ireo lapa miisa 2 milahatra avaratra sy atsimo dia ny lapa "Fenohasina" ani Rabiby ary ny lapa "Manjakazafy" ipetrahanny mpanjaka sy ireo vadiny. Eo andrefan’ireo lapa ny kianja fikabarianny Mpanjaka aminny fianakaviany sy ny tandapany sady filanonanizy ireo toy ny famonoana omby volavita sy fandihizana. Eo andrefanny kianja kosa ny fasanny mpanjaka Rabiby raibeny sy Ramaintsoakanjo renibeny ary Andriandambotanimanjaka.
3.3. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Fandaminana ny anatinny lapa
Toy izao kosa ny fandaminana anatinny lapa Fenohasina sy Manjakazafy: andrin-trano no eo afovoanny lapa; aminny lafiny avaratra antsinanana mitodika avaratra mianatsimo ny fandrianny mpanjaka koa mianavaradoha ny mpanjaka raha mandry ary mianatsimo kosa ny tongony; aminny lafiny atsinanana atsimo kosa no misy ireo fitaovana fandrahoantsakafonny mpanjaka; aminny ilany avaratra andrefana anaty lapa kosa ny antokompatana misy ny akalana sady fisakafoananny mpanjaka sy ny ankohonany; aminny lafiny atsimo anaty lapa kosa no fitoeranny akoho amamborona sy ny fitaovampiadiana ary fitaovampiasanny mpanjaka.
3.4. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Fizaran-tany teo Ambohidrabiby sy ny manodidina
Tsy nomenny mpanjaka Ralambo zaratany teo Ambohidrabiby sy ny manodidina anefa na Ravoromanga sy ny taranany fa Ambohitrolomahitsy no zaratany nomenny mpanjaka Ralambo anireo zanany telolahy tamin-dRavoromanga mba hiambina ny vavatany any. Satria anefa vady tianny mpanjaka Ralambo indrindra Ravoromanga dia teo ambany antsinananAmbohidrabiby ao Anjanakarivo andrefana aminny zarataninny Zanakarivonivahoaka no nasianny mpanjaka Ralambo ny fasan-dRavoromanga. Izany no antony tsy anananny Zanadravoromanga zaratany eo Ambohidrabiby sy ny manodidina.
Ny avaratry ny lapa, ny avaradrova, ny vakikady avaratra ary ny ivelankady avaratra hatrany ambany avaratrAmbohidrabiby dia zaratany nomenny Mpanjaka Ralambo anny Andriandoriamanjaka izay zanaki Rabefaravolamanjaka taminAndrianamboninolona no zafinny mpanjaka Rabiby, dia ny zanakamam-paranAndriandambotanimanjaka 8 mianadahy izany.
Ny atsimon’ny lapa sy atsimon-drova sy ny ivelan-kady atsimo ary ny ambany atsimonAmbohidrabiby dia zaratany nomenny mpanjaka Ralambo anAmbodifahitra.
Ny antsinanan’ny lapa sy atsinanan-drova sy ny ivelan-kady antsinana hatrany ambany antsinananAmbohidrabiby dia zaratany nomenny mpanjaka Ralambo hoanny Zanakarivonivahoaka, ny Andriandapamananihasiny ao Ikelifaritra sy Ambatomahamanina ary ny Ambohinanjakana.
Ny andrefanny lapa sy ny andrefan-drova ary ny ivelan-kady andrefana hatrany ambany andrefanAmbohidrabiby dia zaratany nomenny mpanjaka Ralambo hoanAntokomaro sy Ambohijina. Anefa ny Zanakarivonivahoaka dia mbola nahazo zaratany ao Andohalo aminny ambany atsimo andrefanAmbohidrabiby. Ravoromanga vadikelinny mpanjaka Ralambo dia nonina niaraka taminny zanany 3 lahy tao androvanAmbohidrabiby.
3.5. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Ny vavahadinAmbohidrabiby
3.6. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Ny toeram-pantsakana
Any ivelan-kady kosa ny fatsakana efatra dia ireto avy izany: ao andohasaha ao ambany avaratra antsinananAmbohidrabiby ao Ankasina Andohalambono no fakana ny rano hampiasainny mpanjaka sy ny fianakaviany aminny fiainany andavanandro handroana sy hisasana sy hanahazana ny lamba landy fitafin-dRalambo sy ny ankohonany. Aminny tehezana aminny lafiny andrefanAmbohidrabiby ao Andohalo no hakana ny rano hidiovana amin’ny vitan-dratsy sy hisasanny vahoaka. Aminny anelakela-bohitra ao atsimonAmbohidrabidrabiby kosa no tsakaina ny rano hampisainny vahoaka aminny andavanandro toy ny nahandro sy hisasasna. Ao avaratr’Ambohitrakely eroa ambany avaratrAmbohidrabiby kosa ny fantsakana farany atao hoe Andoharanonandriana ka nisy voarabe naniry teo. Misy zohy maro koa aminny atsimo sy antsinanana anaty hadinAmbohidrabiby izay mivoaka mianatsimo any Ambodifahitra. Ankoatrizany, teo Andohalo misy fantsakana fidiovana eo anekela-bohitra. Aminny lafiny atsimo andrefanAmbohidrabiby no toerana fikabariani Mpanjaka Ralambo aminny vahoakany.
3.7. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Fonenanireo zana-dRalambo sy ny vahoakany
Ireo zanaka natera-dRalambo kosa anefa dia nonina teo Ambohidrabiby ihany raha mbola kely saingy rehefa lehibebe dia nomeny zaratany honenana aminny vohitra manodidina toa an’Ambohimalaza Andriantompokoindrindra, Ambohimanga Andrianjaka, Lazaina, Ambohimanarivo akaikinny Talata Volonondry teo Andriampolofantsy tany amboalohany vao nifindra tao Antsomangy, Manandriana, Masindray, Falimanjaka, Ankorombe akaikinny Talata Volonondry Andriamaneforalambo, Ambohitrolomahitsy Zanadravoromanga, sns.
Rehefa nilamina tanteraka ny fanjakan-dRalambo vao nidina nanorin-tanàna manodidina anAmbohidrabiby ny sasany taminny mponinAmbohidrabiby ka taminizany no niorina ny tanàna manodidina anAmbohidrabiby dia Ambohitrakely ao avaratra; Ampahidralambo sy Fonohasina ao avaratra-antsinanana; Ambodifahitra ao atsimo; Ambatondralambo ao atsimo-andrefana; Anjanakarivo sy Ambatomahamanina ao antsinanana; ary Ambohijina sy Antokomaro ao andrefana.
3.8. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Ny fandaminana ny fasana
Nanafatra kosa anefa Ralambo fa rehefa miamboho izy dia eo atsimonny fasana nanafenana an-dRabiby sy Ramaintsoakanjo ary Andriandambotanimanjaka no hanorenana ny fasany sy ny anireo vadiny. Izany fandaminana izany dia maneho, araka ny fomba merina, fa Rabiby sy ireo doriany dia nataon-dRalambo ho ambony firazanana noho Ralambo sy ireo taranany. Ny antony angamba dia noho ny hasin-dRabiby raibeny sy noho ny fifanarahana nisy teo amin-dRabiby sy Andriamanelo momba ny nampanjakana an-dRalambo ary ny aminny maha-manara-dreny an-dRalambo teo Ambohidrabiby. Tsy sahy nihoatra an-dRabiby raibeny arakizany i Ralambo fa nanome hasina azy ho aminny avaratra. Nahatakatra ny tantara fonosinny filahatry ny fasan-dRabiby sy Ralambo eo Ambohidrabiby ny mpanjaka Andrianampoinimerina ka nanafarany fa eo aminny avaratry ny fasan-dRabiby no anorenana ny fasan-dRasendrasoa vadibeny sy ireo taranany, koa ao no misy ny fasan-dRasendrasoa.
Koa hatraminAndrianampoinimerina dia toy izao ny filahatry ny fasana 7 miandalana ao aminny rovanAmbohidrabiby, araka ny filaharany avy avaratra mianatsimo: ny fasan-dRasendrasoa miloloha trano masina sady misy ireo taranany no avaratra indrindra.Eo atsimonny tranomasin-dRasendrasoa ary mitohoka aminy dia misy ny fasani mpanjaka Rabiby. Mitohoka aminy eo atsimony ny fasan-dRamaintsoakanjo. Mitohoka eo atsimony kosa ny fasanAndriandambotanimanjaka. Eo atsimonio kosa ny lalan-kely mivoaka aminny vavahady andrefanny rova. Eo atsimonny lalankely, ny fasanny mpanjaka Ralambo. Mitohoka aminio eo atsimo ny fasan-dRatsitohinamanjaka. Ary mitohoka aminio sy aminny atsimo indrindra ny fasanny zanaka vavin-dRalambo sy Ratsitohinamanjaka, izay very anarana nefa lazainny lovantsofina fa vadinAndriandambotanimanjaka. Izany fasanandriana miisa 7 ao Ambohidrabiby izany dia endriky ny fahafenoanny hasina sy ny tontolo eo aminny vohitrAmbohidrabiby sy ny fahatanterahana ary ny fitohizanny taranaky ny mpanjaka mandrakizay doria.
3.9. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Fanohizana nataonAndrianampoinimerina
Raha nandamina ny fizaran-tany teo Ambohidrabiby ny mpanjaka Andrianampoinimerina 1787-1810 dia tsy novainy ny fanaon-dRalambo: teo aminny rova no nisy ny tranokotona nonenan-dRasendrasoa vadiny sy ireo zanany; ny avaratry ny lapa sy ny vakikady avaratra ary ny ambany avaratrAmbohidrabiby dia nomeny ny Andriandoriamanjaka; ny atsimonny rova ka hatrany ambany atsimo dia nomeny anAmbodifahitra sy Rafotsimarovahoaka - Raberanto avy eo Ambodifahitra, lehilahy mpitaritafika malaza dia nataonAndrianampoinimerina ho isanny zanadralambo; ny atsinananny rova sy ny ambany antsinana rehetra dia nitambaranny Zanakarivonivahoaka, Andriandapamananihasiny ary Ambohinanjakana. Ny andrefanny rova sy ny ambany andrefana dia nametrahany ny Zanakarivonivahoaka, ny Ambohijina sy Antokomaro ary ny mpanompo. TaminAndrianampoinimerina nanjaka dia nisy olona nankasitrahany ka nafindrany sy nomeny zaratany teo Ambohidrabiby, isanizany Andriamiharantsoa izay fianakavianAndrianampoinimerina tany Ikaloy sy Anjafy ary Ambatofisaorana ary nantsoiny hiaraka aminy teo Ambohimanga koa rehefa nilamina ny tany dia napetrany tao Ambohidrabiby aminny zaratany misy ny Andriandoriamanjaka. NotazominAndrianampoinimerina teo Fonohasina Ambohidrabiby koa ny zanaky ny mpanjakanAmbohibeloma avaratra rehefa resinAndrianampoinimerina tao aorianny ady mahatsiravina ny fanjakanAmbohibeloma. Ary farany, i Lehilava izay miaramila mpiambina mahafatrapo anAndrianampoinimerina teny Ambohimanga dia nomeny zara-tany eo ambany avaratra andrefana aminny vohitrAmbohidrabiby izay voahodidina tamboho gasy mandraka ankehitrio ka raikitra ho "Antamboho" ny anaranio toerana io izay misy ireo fasani Lehilava sy ny taranany.
3.10. Fizaran-tany teo Ambohidrabiby Fandaminana ny tanàna taty aoriana
Tato aoriana kosa rehefa niditra ny fivavahana kristiana dia niorina ao aminny ilany avaratra-andrefana ao antamponAmbohidrabiby ny tranom-mpiangonana FJKM Ambohidrabiby taminny tapaky ny taonjato faha-19.
Taminny taona 1896, rehefa nofoananny mpanjanatany frantsay ny firazanana teto Madagasikara sy nasaina nandoa hetra ny Malagasy isan-dahy, ireo taranaka mpanompo teo Ambohidrabiby sy Fonohasina dia tsy mba nanana tany honenana intsony ary tsy nahazo zara-tany taminireo tompony fahiny, ka nifindra monina eny atsimo-andrefanAmbohidrabiby ary namorona tanàna teo natao hoe Antanambao. Ka izany no tsy ahitana taranaka mpanompo manana tany sy trano ao antamponAmbohidrabiby sy ao Fonohasina fa lasa nifindra monina eny Antanambao izy ireo.
4.1. Fombafomba merina teraka teo Ambohidrabiby Ara-politika sy sosialy ary toekarena
Isanizany ny firenena matanjaka, tokana sy mandry fahalemana; fanjakan’andriana sy fiarahamonina miorina amin’ny hasinandriana izay miafina mandrakizay eo Ambohidrabiby; ny anarana hoe "Imerina" niantsoana ny faritry ny fanjakany sy "Ambaniandro" hiantsoany ny vahoakany, ny fandroanandriana sy ny fankalazana ny taom-baovao isaiky ny fitsingerenanny andro vava alahamady Alahamadibe izay nahaterahan-dRalambo; ny tendrombohitra 12 sy ny fiantsoana azy raha mivavaka aminAndriamanitra sy ny razana; ny vady alana ondrana; ny antanan-tohatra teo amin’ny andriana sy ny tety razana; ny fanorona, ny anarana hoe "omby"; ny fiompiana sy fihinana omby.
Tao Mamoriarivo amin’ny faritr’Ambohidrabiby no novorian’Andrianjaka ny arivo lahy honina eny Analamanga – izay lasa Antananarivo – ary ny hoe Manampisoa, Anjohy, Andohalo, Antsahanandriana, Ambohitrakely teny Antananarivo dia anaran-tany nalaina teo Ambohidrabiby, sns… Nisy taminireo Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby no niankandrefana sy nianatsimo rehefa notsofin-dRalambo rano ka lasa andriamanjaka tany Imamo, Vonizongo sy faritri Fianarantsoa iny.
4.2. Fombafomba merina teraka teo Ambohidrabiby Ara-kolontsaina
4.3. Fombafomba merina teraka teo Ambohidrabiby Ara-taozavatra
Tamin’ny taozavatra kosa dia Ambohidrabiby no renivohitry ny fanenomana lambalandy aty Imerina. Fony tany Ambohitsitakatra, ny reninny mpanjaka Habib arabo io reniny io ary nanaraka azy hatrany andafinny riaka no voalohany nitondra taty anivontany ny fahaizana tenona landy sy nampita ny fahaizany manenona landy taminny vinantony Ramaintsoakanjo sy ny zafiny roa vavy dia Rabefaravolamanjaka sy Randapavola, fa nofeperany tsy hivoaka ny zanaka amam-parany izany fahaizana landy izany. Tsy mahagaga araka izany raha ireo Andriandoriamanjaka eo Ambohidrabiby, izay taranaky ny mpanjaka Rabiby no mpanenona ofisialy ny lambalandy itafiana sy ifonosanireo andriamanjaka nifandimby teto Imerina sy hakana ny soherina ilaofan’ireo mpanjaka merina hatramin-dRalambo ka hatramin-dRanavalona III. Izany dia noho ny hafa-dRabiby sy Ralambo manao hoe "Tsy andriamanjaka raha tsy mitafy ireo lamba tenomin’Andriandoriamanjaka eto Ambohidrabiby". Koa araka ny lovantsofina dia ireo Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby no nitafy ny jaky voalohany taty Imerina. Tsy mahagaga koa raha taminImerina, ny andriana ihany no nahay nanenona lamba landy ary ny tena andriana merina dia tsy nitafy lamba arindrano avy any Ibetsileo na lamba landy avy any Imamo.
5.1. Ambohidrabiby mitaha aminny vohitra hafa Lovabe tsy mialonjafy sy hasinImerina
Ambohidrabiby no "lovabe tsy mialonjafinImerina" satria na iza Zanakandriana, Zanadralambo, Andriandoriamanjaka, Zazamarolahy, Andriamasinavalona, Zanakandriamamilaza, Andriantompokoindrindra, Andrianamboninolona, Andriandranando, Zanadravoromanga dia samy taranaky ny mpanjaka Rabiby nanjaka sy nafenina teo Ambohidrabiby. Ary ireo olona rehetra mitonona ho isanny foko merina dia teo Ambohidrabiby no nahateraka izany anaram-poko izany sy ivonizany foko izany tany amboalohany. Ambohidrabiby koa no atao hoe "hasinImerina", satria eo Ambohidrabiby no nafenina mandrakizay doria ny hasinandriana sy ny hasinny fanjakana merina.
5.2. Ambohidrabiby mitaha aminny vohitra hafa Sompitra fanovozan-kasina
Voafangotra aminny fomba telo fanaonny mpanjaka merina izany maha sompitra fanovozan-kasinny andriana merina anAmbohidrabiby izany araka izao:
Aminny andronny fandroanandriana, raha tsy maty ny omby volavita teo Ambohidrabiby tsy mahazo mamono ny azy Ambohimanga, Analamanga, sy ireo tendrombohitra 12 sy vohitrandriana sisa. Ny antony dia satria Ambohidrabiby no sompitra mitahiry ny hasinandriana merina;
Teo Ambohidrabiby aminny Andriandoriamanjaka no alaina ny soherina hilaofanny Andriamanjaka merina na taiza toerana nisy ny renivohimpanjakana, antony ara-pahamasinana, arampahadiovana ary ara-pitokisana no nahatonga ny mpanjaka Ralambo sy izay nandimby azy nanao izany.
Eo Ambohidrabiby aminny Andriandoriamanjaka no tenomina ny lamba jaky itafiana sy ifonosanny mpanjaka rehetra taty Imerina na izy mpanjaka na taiza nanjaka, hatramini Ralambo ka hatraminny Ranavalona III. Tsy ara-dalàna tsy ara-pomba ny fahefanny mpanjaka merina izay tsy mitafy na mifono ny jaky notenominireo Andriandoriamanjaka teo Ambohidrabiby;
5.3. Ambohidrabiby mitaha aminny vohitra hafa RenivohitrImerina faha mpanjaka
Ary farany, Ambohidrabiby no ivo sy renivohitrImerina taminny mpanjaka Ralambo nanjaka 1575-1610. Nohajainny mpanjaka Andrianjaka Ambohidrabiby ka antony nisafidianany anAntananarivo ho renivohi-panjakany satria ny toerana misy anAmbohidrabiby dia eo aminny zoro avaratra antsinananAntananarivo. Ambohidrabiby ihany koa no eo aminny alahamadintany na zoro firarazana raha jerena ny fipetrakireo tendrombohitra 12 masina ary Antananarivo no eo aminny laka.
Ny mpanjaka Andriamasinavalona dia nifidy efa-dahy samy hafa reny izy efatra lahy ireo taminireo zanany 12 isa mba hampanjakainy ka samy nampanjakainy taminny vohitra iray avy izy efa-dahy ireo dia teo Antananarivo, Ambohidrabiby, Ambohimanga ary Ambohidratrimo. Andrianavalomanotronimerina no anaranilay zanaky ny mpanjaka Andriamasinavalona izay nampanjakainy teo Ambohidrabiby sy Amboatany. Aminny maha taranakAndrianamboninolona ny reninAndrianavalomanotronimerina no antony nampanjakanAndriamasinavalona anAndrianavalonimerina teo Ambohidrabiby. Andrianampoinimarina nanjaka 1787-1810 koa dia nanana vady 12 ka rehefa niamboho Rabodonimerina vadibeny dia Rasendrasoa no lasa vadibeny. Ary napetrakAndrianampoinimerina teo Ambohidrabiby i Rasendrasoa vadibeny koa mbola ao ny fasany nanafenana azy sy ny taranany. Hatramin’Andrianampoinimerina ka hatramin’ny Ranavalona III, dia renivohitry ny faritra Mandiavato Ambohidrabiby, tsy vodivona no tsy menakely fa natao menabe tsy alaim-bodihena Ambohidrabiby.
Teo Antananarivo dia nomenny mpanjaka Andrianampoinimerina haja manokana Ambohidrabiby satria ny Andriandoriamanjaka sy ny tera-dRaberanto samy avy eo Ambohidrabiby no nahazo zaratany tao anatinny faritra voahodidina hadivory tao Andohalo niaraka taminAndriamasinavalona sy Andriateloray. Ambohidrabiby sy Ambohimanga ary Ilafy mitambatra no antsoina hoe "Avaradrano", ilay zoky sy lehibe indrindra amin’Imerina enin-toko. Aminireo tendrombohitra 12 masina aty Imerina dia fahatelo aorian’Analamanga sy Ambohimanga ny filaharanAmbohidrabiby. Renivohitry ny fari-piadidiam-panjakana ny vohitra manodidina azy tamin’ny fanjanahantany Ambohidrabiby. Ankehitriny dia ao anatin’ny kaomina Ambohidrabiby no misy azy.
6. Ireo olo-malazanAmbohidrabiby fahizay
Tsongaina manokana aminireo ireto olo-malaza teo Ambohidrabiby nanomboka taminny taonjato faha-16 ka hatraminny taona 1895: Rabiby, Ralambo, Ramaintsoakanjo, Randapavola, Rabefaravolamanjaka, ireo Andriandoriamanjaka, Ravoromanga, Andrianavalomanotronimerina, Rasendrasoa, Ramatoa Rapoenty, Rajaokarivony ODP 13 hrs, Andriamiharantsoa, Rainitavimaserana, Raberanto, Lehilava, Printsy Rabemaso, Rainimazaoro Razakanavalona, ary Randriambola.